Best gụgharia Video teepu 2015 5
Best gụgharia Video teepu 2015
Video ndekọ nye onye ọrụ na ala na afọ ojuju na maka otu ihe ha bụ mmemme na-ahuta ka otu nke kasị mma na-eme ka n'aka na videos ndị ebudatara na converted na ịke na klas. A nkuzi e dere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nbudata onu na mkpokọta gụgharia video nbudata na-mere. The omume na a ga-ẹkenam ke akụkụ ikpeazụ ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ụlọ ọrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Part 1: Best gụgharia Video teepu 2015
Nkebi nke 2: Top 5 gụgharia video website idekọ videos
Wondershare Video Converter Ultimate Na Wondershare video edekọ bụ ndị kasị mma na ala nke software mmemme na-agbakwunyere n'ime onye ọ bụla ọzọ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na ikwu na nbudata na faịlụ na-streamed online. Ihe omume ndị a jupụtara ịtụnanya atụmatụ na-adịghị na ihe ọ bụla ọzọ omume a na-mepụtara ma ọ bụ e mepụtara ebe ọ bụ na Wondershare Video Converter Ultimate bụ ihe kasị mma na ọkaibe omume iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na mkpokọta onu bụkwa onye na-eme ka o kwe onye ọrụ iji na-enweta kasị mma na ndị ọkaibe N'ihi na ikwu na video gụgharia.
The n'ozuzu onu nke Wondershare Video Converter Ultimate dabeere na eziokwu na onye ọrụ na-abụghị nanị pacified kamakwa ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ihe omume ndị na-kwuru na nke a na ngalaba bụ ndị na e wuru iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na nke a na-ọkọkpọhi results ndị na-na akara na chọrọ. The n'ozuzu nke nke onye ọrụ ibudata gụgharia videos e kpebiri. Na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ na-eme ihe omume dị ka otu n'ime ndị kasị mma nke niile ugboro:
1. The video download na akakabarede bụ ugboro 30 ngwa ngwa ka tụnyere ndị ọzọ omume.
2. The ebudatara video nwere ike converted ọ bụla usoro na ala na afọ ojuju.
3. Ihe omume na-enyekwa Ultra HD 4K nkwado ka ọrụ.
4. The ebudatara media nwekwara ike-streamed ka TV
5. The video Downloader bụ mfe iji na onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na ọ bụ nanị 1 click a mere ibudata videos.
6. The DVD akakabarede na-mere na nke kacha mma n'ụzọ na onye ọrụ nwere ike inweta ihe kasị mma nke ahụmahụ.
7. The ngụkọta format nkwado bụ 159+ nke bụ kasị elu na ahịa.
8. The Wondershare Video Converter Ultimate na Wondershare video edekọ bụ ndị kasị mma ngwaọrụ iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye a enweghị ntụpọ ahụmahụ ka tụnyere rivals na-ekpe ndị nọ ájá.
Olee otú idekọ video na Wondershare video edekọ
Nzọụkwụ na-eso usoro ihe omume dị mfe iso ma onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma ụzọ na nakweere na-arụ ọrụ mere nke bụ ka ndị a:
1. Download na arụnyere usoro ihe omume a. Ndị na-esonụ ákwà ga-apụta mgbe nzọụkwụ e dechara:
2. The ọrụ mgbe ahụ mkpa ijide n'aka na na mmalite menu na-enweta na usoro ihe omume a na-achọta na-eme ka n'aka na nhọrọ na-emeghe. Nhọrọ a na-ahụ na-arụ ọrụ na online video bụ na-egwuri iji jide n'aka na mkparịta ụka igbe na-egosi nke nwere rec button agbakwunyere n'ime ya.
3. The onye ọrụ nwere ike eme ka ahụ n'aka na video ebudatara converted na onye ọrụ nwere ike na-enweta converted video na klas na ịke na nke a kwa okokụre usoro na zuru:
Wondershare video convertor bụ ngwá ọrụ dị ike nke na-abịa na ndị niile yiri mbipụta na-enwe nchegbu banyere video ndekọ, edezi, nkwanye ka TV, na-ere ọkụ, converting na nbudata na. The Video edekọ e agbakwunyere ma ọ bụghị ike ibudata iche iche. The ụzọ na video edekọ bụ NchNhr> Video-edekọ ihe. Wondershare Video edekọ ego n'anya arụnyere ka anya dị ka Wondershare video convertor kacha e arụnyere. Ọ dịghị iche iche echichi a chọrọ.
Iji jide n'aka na onye ọrụ na-arụ kasị mma na ndị ọkaibe gụgharia video download ahụmahụ ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ ise weebụsaịtị na-atụle:
1. ihuenyo Nkedo
Ọ bụ otu n'ime ndị weebụsaịtị nke na-eme usoro nke online ndekọ na mkpokọta akakabarede mfe na ọkaibe. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma video convertor ga-eji iji tọghata gụgharia videos na e dere.
2. WM edekọ
Ọ bụkwa otu n'ime omume nke na-ahụ na Ndekọ gụgharia videos bụghị a nnukwu nsogbu na niile na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na website na-agba ọsọ mgbe okwu ndị na ọnọdụ a na-agụ na zuru.
Ọ bụ ihu ọma na ngwa na-eji iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi gụgharia videos ebudatara jidesie usoro na ala na afọ ojuju na-eji ngwa na a ga-arụnyere na chrome na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ngwa na-ibudatara na chrome web ụlọ ahịa.
4. Ọ bụla video edekọ
Ọ bụkwa otu nke kasị mma na nke Steti nke nkà na mmemme iji jide n'aka na ihe kasị mma e nyere mgbe ọ na-abịa online ndekọ saịtị. The website dị mfe iji na mkpokọta functionalities bụ ọkaibe ad egwu.
5. Ihuenyo Nr
Ọ bụ otu n'ime ndị weebụsaịtị na na oru nnọọ n'isi onu na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ahụmahụ na ekpughepụru nke website bụ tinye n'ọrụ iji jide n'aka na ihe kasị mma na-e si echiche nke video download.
Top 5 Atụmatụ gị mkpa maara banyere ihuenyo edekọ pro
Olee otú iji tọghata OGV ka YouTube FLV ọsọ ọsọ na mfe
Olee otú iji tọghata Facebook Video ka MP3
Olee otú dezie MKV Video Files na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
> Resource> Video> Best gụgharia Video teepu 2015